New York (2009) | MM Movie Store
တခါတလတေော့လညျး တခြို့အဖွဈပကျြတှကေ ဘယျသူ့ကိုမှအပွဈတငျလို့မရဘူး။ကိုယျ့ခံယူခကျြနဲ့ကိုယျတော့အာလုံးကမှနျနကွေတာပါဘဲ။ဒီဇာတျလမျးလေးကတော့ အမရေိကနျနိုငျငံကို အိန်ဒိယကနေ စကျောလာရှဈဆုရလို့ကြောငျးလာတကျတဲ့ကောငျလေး အိုမာ (Neil Nitin Mukesh) သူ့ရဲ့ပထမဆုံး ပွညျပကိုထှကျဖူးတာပါ။
နယူးယောကျကျောလိပျမှာရောကျတော့ မာရာ(Katrina Kaif) တို့ ဆမျး(John Abraham) တို့နဲ့သူငယျခငျြးတှဖွေဈလာကွပါတယျ။သူတို့ရဲ့အိမျမကျတှကေို ပုံဖျောဖို့ စိတျအားထကျသနျ နကွေတဲ့အခြိနျလေးပေါ့။သူ့တို့သူငယျခငျြးသုံးယောကျရဲ့ပြျောရှငျမှုတှေ၊အိမျမကျတှကေို ဖကျြဆီးပဈမယျ့အရာပျေါလာပါတော့တယျ။
9/11 ဆိုတဲ့ World Trade Center ကွီးကို အကွမျးဖကျမှုကွီးတဈခုအပါဝငျပေါ့။“ငါခုံးမတဈကောငျကွောငျ့တလှလေုံးပုတျ” ဆိုတဲ့အတိုငျး ရဲတှကေမသင်ျကာတဲ့လူမှနျးသမြှ အကုနျဆှဲစိကွတာပေါ့။ပွီးတော့ နညျးမြိုးစုံနဲ့နှိပျစကျ၊ စဈမေးတာပေါ့ဘယျသူ့ကိုအမှုပတျမလဲ…….
နောကျပွီး ပွနျလှတျလာတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတှအေရငျလိုလှပနိုငျပါမလား? နောကျထပျဘာတှဆေကျဖွဈမလဲဆိုတာတော့ကိုယျတိုငျဘဲကွညျ့ရှုကွပါ။သရုတျဆောငျပိုငျးအရမျးကောငျးတဲ့ Ifra Khan က FBI အေးဂငျြ့အဖွဈနဲ့ ပါဝငျထားတာပါ။
သူငယျခငျြးသံယောဇဉျတှေ9/11 ပွီးတော့ရှပွေ့ောငျးအခွခေနြထေိုငျတဲ့အိန်ဒိယသားတှအေပျေါဆကျဆံမှုတှကေို ဇာတျရှိနျအတကျအကြ၊ရငျတမမနဲ့ကွညျ့ရှုရမှာပါ။
တခါတလေတော့လည်း တချို့အဖြစ်ပျက်တွေက ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်တင်လို့မရဘူး။ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်တော့အာလုံးကမှန်နေကြတာပါဘဲ။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို အိန္ဒိယကနေ စကော်လာရှစ်ဆုရလို့ကျောင်းလာတက်တဲ့ကောင်လေး အိုမာ (Neil Nitin Mukesh) သူ့ရဲ့ပထမဆုံး ပြည်ပကိုထွက်ဖူးတာပါ။
နယူးယောက်ကော်လိပ်မှာရောက်တော့ မာရာ(Katrina Kaif) တို့ ဆမ်း(John Abraham) တို့နဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကို ပုံဖော်ဖို့ စိတ်အားထက်သန် နေကြတဲ့အချိန်လေးပေါ့။သူ့တို့သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊အိမ်မက်တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်မယ့်အရာပေါ်လာပါတော့တယ်။
9/11 ဆိုတဲ့ World Trade Center ကြီးကို အကြမ်းဖက်မှုကြီးတစ်ခုအပါဝင်ပေါ့။“ငါခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့်တလှေလုံးပုတ်” ဆိုတဲ့အတိုင်း ရဲတွေကမသင်္ကာတဲ့လူမှန်းသမျှ အကုန်ဆွဲစိကြတာပေါ့။ပြီးတော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်၊ စစ်မေးတာပေါ့ဘယ်သူ့ကိုအမှုပတ်မလဲ…….
နောက်ပြီး ပြန်လွှတ်လာတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေအရင်လိုလှပနိုင်ပါမလား? နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကိုယ်တိုင်ဘဲကြည့်ရှုကြပါ။သရုတ်ဆောင်ပိုင်းအရမ်းကောင်းတဲ့ Ifra Khan က FBI အေးဂျင့်အဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ထားတာပါ။
သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်တွေ9/11 ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်တဲ့အိန္ဒိယသားတွေအပေါ်ဆက်ဆံမှုတွေကို ဇာတ်ရှိန်အတက်အကျ၊ရင်တမမနဲ့ကြည့်ရှုရမှာပါ။